यि दुई सपूतलाई चुनाव लड्न आग्रह! साथ दिनेले शेयर गरौ – Taja Khawar
यि दुई सपूतलाई चुनाव लड्न आग्रह! साथ दिनेले शेयर गरौ
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २२, २०७८ समय: २:३८:३३
गायक रोबिन लेख्छन्, “कुलमान दाइ (कुलमान घिसिङ) चुनाव आँउदैछ । दाइ म भित्रैदेखि तपाईंलाई उमेदवारी दिन आग्रह गर्दछु, “तपाईंले पक्कै पनि जनताको साथ” पाउनुहुनेछ ।
म नेपालीले शहिरहेको पीडा देखेर थकित भैसकेको छु, हाम्रो देश धेरै राम्रो हुन सक्छ ।”
“कृपया मेरो कुरामा गम्भिरतापूर्वक सोच्नुहोला, अब त अति भैसक्यो, अब आउने पुस्ताको हितका लागि हाम्रो देशलाई परिवर्तन गर्ने समय आाइसकेको छ । तपाईसँग मेरो सम्पूर्ण साथ छ ।
अन्यथा हामी त्यही पुराना जोकर हरुकै फन्डामा पर्छौं,” उनले भनेका छन् ।
Last Updated on: June 5th, 2021 at 2:38 am